Huwandu hwevanhu hwe Martech Zone | Martech Zone
Huwandu hwevanhu hwe Martech Zone
Mugovera, Kubvumbi 10, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Douglas Karr
Iwe unogona kunge wakacherekedza isu tanga tichimhanya Crowdsscience kuongorora pane blog kwechinguva ikozvino. Ndinovimba watora nguva yekupindura ongororo - mhedzisiro yacho inoshamisa. Heano mamwe akakosha:
62.5% yevaverengi vari college graduates, 21.9% vane graduate degrees
51.6% yevaverengi vari akashanda nguva yakazara, 32.3% vari kuzvishandira.
Vazhinji vevaverengi vari vanoita zvisarudzo kana kuva nesimba.
Vaverengi vanobva makambani ehukuru hwese:
Vazhinji vevaverengi vari vatungamiriri vakuru kana vatungamiriri emakambani avo.
Vazhinji vevaverengi vari mu 34 kusvika 44 zera renji.
56.3% yevaverengi vane maonero asina kunaka pane hupfumi.
Vazhinji vevaverengi vanoita inodarika $ 75k, ine akawanda kumusoro kwe $ 150k.
Vazhinji vevaverengi vanoshandisa iyo Internet pamusoro pe24 maawa pavhiki, nechetatu-chinopfuura maawa makumi matatu nemasere pavhiki.
Zvichida zvinonyanya kufadza aive mamwe maitiro nezveamabhizimusi - anopfuura hafu yevaverengi vakati vaifarira kutanga bhizinesi ravo vega uye / kana kuchinja mabasa nemabasa. Sa serial entrepreneur (aka - mukomana anoda kusimuka kubva kune rimwe dambudziko kuenda kune rinotevera), izvi zvaindinakidza. Nekufamba kwenguva, zvinogona kuratidza kuti ndiri kukwezva sevane pfungwa-vaverengi kune iyo blog.
Aya huwandu hwevanhu ndipo pandiri kuda kuti blog riite senge nyaya yekufurira uye kubatsira!
Google Yakauraya iyo Google Analytics Star
Rongedza Bhizinesi Rako neGoogle Apps
Interesting and thanks for sharing the info and the tool! Data for a data guy!